အဖ၏နေ့အတွက်လက်ဆောင်များ - ကိုယ်ပိုင်စောင့်ရှောက်မှု၊ အဝတ်အထည်နှင့်အခြားအရာများ။ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
သင်အနည်းငယ်လှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်မယ်ဆိုရင်, အောက်ပါဖြစ်ကြသည် စုံလင်သောဖခင်၏လက်ဆောင်ကိုရှာရန်သင့်အားအကြံဥာဏ်များ:
2 အဝတ်အစား, ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
3 စာအုပ်များ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်တေးဂီတများ
မျက်နှာဆံပင်ကိုဂရုစိုက်ခြင်းသည်မရှောင်လွှဲနိုင်သောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုရှုထောင့်ကနေ, ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဤအပိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဆောင်းပါးများသည်အမြဲတမ်းထိခိုက်နစ်နာသည်။ ဂန္တ ၀ င်သောသင်တုန်းများနှင့်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်ကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်။ ကြာရှည်ခံပစ္စည်းများကိုစဉ်းစားပါ။ သို့မဟုတ်ပိုကောင်းသေးသည် ဂန္ shaving set ကြောင်းတူညီတဲ့တင်ဆက်မှုအတွက်နှစ် ဦး စလုံး tools များပါဝင်သည်။
Un မိတ်ကပ်အိတ် ၎င်းသည်လူအားလုံးအတွက်အလွန်လက်တွေ့ကျသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်ဖခင်များပါ ၀ င်သည်။ ဒါ့အပြင်သင့်မှာများသောအားဖြင့်တစ်ခုမရှိဘူး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့်အများသုံးရေချိုးခန်းသုံးအိတ်ကိုစဉ်းစားပါ။ သို့သော်အားလုံးအထက် ကြောင်းပြည့်စုံတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအာဆင်နယ်နေရာလုံလောက်သောအာကာသရှိပါတယ် ငါခရီးစဉ်သို့သွားသောအခါ သန့်စင်သောသန့်စင်ခန်းသုံးအိတ်တစ်လုံးသည်သင်တုန်းအတွက်နေရာ၊ မရှိမဖြစ်သွားတိုက်တံနှင့်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောသွားတိုက်ဆေး၊ Aftershave၊ မွှေး၊ ခေါင်းလျှော်ရည်၊
မုတ်ဆိတ်ကိုဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်မွှေးပုလင်းတစ်လုံး (သူအသုံးပြုသောအမှတ်အသားကိုသင်သိလျှင်ပိုကောင်းမည်၊ သင်သူနှစ်သက်မည်ဟုထင်သူနှင့်အမြဲတမ်းအခွင့်အရေးမယူလျှင်) လည်းဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု၏လယ်ပြင်၌ကြီးသောစိတ်ကူးများ.
သငျသညျသူမ၏သူမဝတ်ဆင်နိုင်သောအရာတစ်ခုခုကိုလက်ဆောင်ပေးချင်လျှင်ပြာပြာရောင်ညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီပွ, အဝတ်လျှော်သို့မဟုတ် button-down ကော်လာကိုစဉ်းစားပါ။ ဂန္တ ၀ င်လက်ဆောင်များမှာအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်လေ့ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်အကယ်၍ သင်ဟာဝတ်စုံကိုပုံမှန်ဝတ်ဆင်သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်စည်းဟာအဝတ်အထည်နဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းနယ်ပယ်မှာလည်းပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်သင်အမြဲသယ်ဆောင်နိုင်သည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းမဟုတ်လော အခြားလက်ဆောင်များနှင့်မတူဘဲ၊ သံမဏိကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ သို့မဟုတ်သားရေက၎င်း၏အသုံးဝင်မှုကိုဆုံးရှုံးဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင့်ကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည် သင်၏ကဒ်ကိုစနစ်တကျထားရန်အခွင့်အလမ်း (နှစ်များတစ်လျှောက်သင်စုဆောင်းထားခဲ့သည့်အရာများစွာကိုစုဆောင်းထားခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ နေရာလွတ်ယူရန်လိုအပ်သည်) ထို့ကြောင့်သင်လိုအပ်သည့်အရာတစ်ခုကိုအခါအားလျော်စွာရယူနိုင်သည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများနာရီများနှင့်ဖြစ်ကြသည် ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။သင်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းသောပုံသဏ္ဌာန်နှင့်နေထိုင်ရန်ဂရုစိုက်သူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်အလွန်သင့်လျော်သည်။ အကယ်၍ မရရှိလျှင်၊ ၎င်းကိုစတင်ရန်ခက်ခဲသောအချိန်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၊ သင်ထင်ရသလောက်အေးမြသည်၊ နည်းပညာဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သတိထားပါ။ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်သင်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လိုအပ်ကြောင်းသေချာမသိပါကအန္တရာယ်မကျပါစေနှင့်။
သင်၏အိပ်ရာဘေးမှာစာအုပ်အမြဲတမ်းရှိနေသလား။ ထို့နောက်စဉ်းစားပါ သင်အကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာမှနောက်ဆုံးထုတ်ဝတ္ထု သို့မဟုတ်မိသားစုအစားအစာများအတွင်းစကားစမြည်ပြောဆိုရာတွင်သူရည်ညွှန်းကိုးကားခြင်းကိုသူမရပ်တန့်စေနိုင်သည့်ရှေးဟောင်းစာပေ၏ရှေးအကျဆုံးထုတ်ဝေမှုဖြစ်သည်။ ဖခင်များနေ့အတွက်လက်ဆောင်အဖြစ်သူ၏ဝါသနာ (ကားများ၊ ဓာတ်ပုံ၊ ပန်းချီ၊ ခရီးသွားခြင်း) အကြောင်းပြောသောစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုစဉ်းစားသင့်သည်။
သင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူဖြစ်ပါကဘောလုံးကိုရိုက်ရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းရှိသည် ဒီဗွီဒီသို့မဟုတ် Blu-ray ရှိရုပ်ရှင်တစ်ကား။ ရုပ်ရှင်ရုံကောင်းကောင်းနေသမျှကာလပတ်လုံး၊ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူတွေဟာအမျိုးအစားဒါမှမဟုတ်ဖြန့်ချိမယ့်နှစ်ကိုဂရုမစိုက်ကြဘူး။ သင်၏ဗီဒီယိုစာကြည့်တိုက်ကိုအရင်ကြည့်။ ကြည့်။ မရပါ။ သင်မကြာသေးမီကစီးရီးကိုပိုနှစ်သက်ပါကသူ၏အကြိုက်ဆုံးသို့မဟုတ်သူမတွေ့သေးသောသူနှင့်သူချစ်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်သောအရာတစ်စုံကိုစဉ်းစားပါ။
"ဗီနိုင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောအရာမရှိ" ဟူသောစကားစုသည်သင်၏ပါးစပ်ထဲမှထွက်လာသလား။ အကယ်၍ အဖြေကဟုတ်ကဲ့၊ ဂန္ရော့ခ်ဗီနိုင်း သင်၏စုဆောင်းမှုထဲမှပျောက်နေသည်။ မကြာသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ဗီနိုင်းအဖျားရောဂါကြောင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားသည် ဂန္ထဝင်ရော့ခ်အယ်လ်ဘမ်သည်မျက်လုံးကိုကဲ့သို့ကျေနပ်ရောင့်ရဲစေသည့်ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်မှုများဖြစ်သည်.
အကယ်၍ သင်သည်ဝီစကီပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၊ Scotch မင်းရဲ့ဘားကက်ဘိနက်ထဲမှာအခွင့်ထူးခံနေရာမှာထားလို့ရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲဖြစ်ပျက် သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရက်ကိုသောက်ပါ (ဂျင်၊ ရမ်၊ ဘရန်ဒီ ... ) အကယ်၍ သင့်တွင်ရှိပါက - ဂုဏ်သတင်းကြီးသောအမှတ်တံဆိပ်မှပုလင်းသည်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုကိုဆိုလိုသည်။
ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့လက်ထဲမှာအမြဲတမ်းသွားနေသလား။ ကြောင်းအမှု၌, က plunger ကော်ဖီဖျော်စက် ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုရဲ့စိတ်ကူးပါ။ ပြင်သစ်စာနယ်ဇင်းစနစ်သည်သင့်အားရိုးရာကော်ဖီပြုလုပ်နည်းသို့ပြန်သွားရန်ခွင့်ပြုသည်: လက်စွဲစာအုပ် (လျှပ်စစ်မီးသို့မဟုတ်စျေးကြီးတောင့်မရှိဘဲ) ။ သို့သော်အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာသင်သည်ကော်ဖီကြမ်းတမ်းသူတစ် ဦး ဖြစ်မည်ဆိုလျှင်သင်သည်အရသာနှင့်မွှေးကြိုင်သောကော်ဖီများကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ဖခင်များနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်များ
ဒီနွေ ဦး ရာသီအတွက်ခြောက်လတတ်နိုင်အခြေခံ